I-gvSIG i-Fonsagua, i-GIS yoyilo lwamanzi-iGeofumadas
gvSIG Fonsagua, i-SIG yokuyila kwamanzi
NgoFebruwari, 2011 GvSIG, Zobunjineli, yokuzonwabisa
Sisisixhobo esibaluleke kakhulu kwiiprojekthi ezijolise kwicandelo lezamanzi nococeko kwisakhelo semibutho yentsebenziswano. Ngendlela eqhelekileyo, ibisebenza neziphumo ezilungileyo Epanet, nangona kunemiqathango kwinkqubo yayo yokulungelelanisa neenguqu.
Emva kokukhangela izizathu zokuba kutheni gvSIG kunye nokuBambisana se eyenziwe engabonakaliyo ngobusuku, ndithathile ixesha lokuphonononga le migudu ebonakala ngathi kumnikelo ongcono kwi software kunye nokuphuhliswa kwentlalo.
I-gvSIG Fonsagua ivela ngaphakathi kwesakhelo seeprojekthi zeNtsebenziswano yaseGalician esele isebenze kumazwe ahlukeneyo akuMbindi Merika nase-Afrika. Kodwa kumazantsi eHonduras apho olu phuhliso lufukame khona, apho iCartoLab kunye ne-Ingeniería Sin Fronteras bayabandakanyeka, ndiyamkhumbula xa wayethetha ngobungozi bokusebenzisa Ukwandiswa koNcedo kwi-gvSIG 1.10.
Amava abonakala elungile kakhulu. Ngokuqinisekileyo sisiphumo semizamo eyahlukeneyo nasemva kokuba imeko ibizama ukungcolisa ngokudibanisa iArcView (pirated mhlawumbi), I-Excel, UkuFumana kunye neefomathi zephepha kunye netikiti zokuqokelela intsimi.
Nangona lo ngumxholo woomasipala ababini kumazantsi eHonduras, imeko iyafana kwiindawo ezininzi zaseLatin America. Ukusasazeka kwedatha, uhlalutyo olungekho mgangathweni, ukubekelwa ecaleni imeko yezoqoqosho, ukusikelwa umda kwizixhobo ezizenzekelayo, ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni kwesoftware yokuthengisa, ukuphinda umzamo ngokufutshane.
Njengomphumo woyilo, isixhobo sakhiwe kwi-gvSIG 1.1.2, eqhuba kwi-desktop version okanye malunga neziphathekayo. Oku kusebenza ngendlela enengqiqo, ukusombulula umjikelo wokuqokelela i-alphanumeric, idatha ye-cartographic, uyilo lwenkqubo kunye nokuveliswa kweengxelo.
Kwinqanaba lendawo, ixhasa ukubanjwa kwedatha ngeGPS yesiqhelo ngohlobo lweendlela. Oku kunokwenzeka ukuba ulungelelwaniso lweendawo zokulinganisa, imithombo, imigca yokuhambisa, iitanki, iidolophu, njl.
Iifom zinokwenziwa ngokwezifiso zokufaka ulwazi, ukuvumela imigaqo yokuqinisekisa engadingi xesha lide ukuyiphumeza. Oku kusebenza kulwandiso olunokuHanjiswa ngokusebenzisa iithebhu eziluncedo. Njengomzekelo kule projekthi, kusetyenziswa iifayile ezimbini, enye inolwazi lwentlalo noqoqosho kubantu abaxhamlayo kwaye enye apho idatha yezobuchwephesha inxulumene nemithombo ekhoyo kunye nolwakhiwo, iiparameter zoyilo kunye nokusetyenziswa okuya kuqwalaselwa kuhlalutyo kuqokelelwa.
Nje ukuba kufakwe idatha, kuyilo olunokwenziwa lunokwakhiwa kwimephu. Kukho konke ukubanakho kwezixhobo ze-gvSIG CAD / GIS, kodwa iFonsagua ibandakanye izixhobo ezongezelelekileyo zokwenza iindlela eziqhelekileyo kuyilo lwamanethiwekhi amanzi, njengokubonisa ukuba inqaku liyindawo yokuqala, xa iinethiwekhi zimbini zidityanisiwe, kunye nokuqinisekiswa kweetopiki kunye neendlela zokugcina ukungqinelana. . Iindawo zempembelelo zinokudityaniswa, kukhethwe uluntu kunye nabantu abaxhamliyo ekubekeni phambili ngokubaluleka kwendleko / inzuzo / ubudlelwane beempembelelo.
Ke kwimeko yothungelwano olusisiseko somxhuzulane, uhlalutyo lunokuqhutywa kwiiparameter zoyilo kunye neemeko. Inkqubo ibonisa itafile apho ungabona khona amacandelo ahlukeneyo okudlala izinto ezenziwa zii-calculator zethu ze-HP ezindala kwaye kungabikho namnye, ukuzula-zula, ukuzula, de sinciphise ilahleko okanye sipheke idatha. Ingatshintshwa ngokwecandelo ngalinye njengobungakanani bombhobho, ukuphakama, kunye nohlobo lwezinto ezibonakalayo ukuqinisekisa isantya kunye nelahleko ziphakathi kweeparameter ezimiselweyo. Lo msebenzi unomdla kakhulu, kuba imibala ebomvu iyakuxwayisa ukuba kukho into engalunganga kwaye kwimeko yokudibanisa okanye yokuphelisa uluntu, kuya kufuneka uphinde ubale kwakhona.
Indlela yokwenza isekelwe kwisetyenziswe ngu-Ingeniería Sin Fronteras, nangona kukho izicwangciso zokuhamba ngaphaya.
Ezinye izinto zinokudityaniswa kuyilo, ezinje ngeetanki zokubonelela okanye iinkqubo zokumpompa. Ngokufaka iiparameter ezinxulumene nombhobho kunye nokugcinwa, ungabala inani lamandla ehashe elifunwa yimpompo. Yilula nje!
Kwaye emva koko unokuvelisa iingxelo ukuxhasa ugcino lwedatha okanye unxibelelane neziphumo. Ingcaciso igcinwe kwiziko ledatha le-SQLite kunye neefom zokumila.
Ngamafutshane, sisixhobo esikhulu sokwakha iinkqubo zamanzi okusela, kunye nokudibanisa nolwazi lwe-cartographic.
Asinakuyihoya into yokuba ifumaneka simahla, njengoko isebenza phantsi kwelayisensi yeGPL. Ikhowudi yayo iyafumaneka xa ufuna ukulungiswa kwiiprojekthi ezifanayo.
Njengomzekelo ndikushiye iisampuli zevidiyo, nangona kwiphepha leFonsagua kukho iividiyo ezininzi, ngaphezulu malunga neprojekthi kunye nomzekelo kunye nedatha.
Phakathi kwemiceli mngeni eqinileyo ye-gvSIG Fonsagua kukusasazwa kwesixhobo phakathi kweenkqubo ezahlukeneyo zentsebenziswano ezisebenza ngesihloko esifanayo. KuseHonduras kuphela, ii-ofisi ze-AECID eMantla naseNtshona zinemigca ethile yeeprojekthi zaManzi ngemali yoluntu evela eSpain edityaniswa yiOfisi yeNtsebenziswano yezoBugcisa. Iya kuba lithuba elihle ukuba bayakwazi ukudibanisa olu phuhliso njengesixhobo sokucwangcisa kunye nokusetyenziswa kwayo kwiiCandelo lobuGcisa ze-mancomunidades noomasipala. Uhlobo olukhanyayo luya kuba lunomdla ekubekweni kweliso ziibhodi zamanzi, zezona zona zihlala zinozinzo. Olu hlobo lomzamo lunokuqinisekisa ukuqhubeka kwale nzame kwiinguqu eziphambeneyo zikarhulumente zala mazwe apho kungekho luhlanga lwaseburhulumenteni luphunyezwe kunye nokuqinisekisa ukulungelelaniswa kweenzame zentsebenziswano.
Kucacile ukuba ubunjineli ngaphandle kwemida buza kuxhaphaza iinzame kwamanye amazwe, kodwa kukwakho nabanye oosomashishini abasebenza kumba wamanzi, njenge-Peace Corps, eyona nto iphambili kwimali eyenziwayo ngoku eHonduras kuyilo lweenkqubo zamanzi okusela. Uninzi lwabasebenzisanayo lujolise phantse kumjikelo ofanayo, ke kuyakunyanzeleka ukuba ucinge ngeendlela zokusasasaza isixhobo kwezinye iimeko zentsebenziswano.
Ukuya kwi-gvSIG yeenguqu zakutshanje kunomnye umngeni, nangona iimeko zineenkalo ezahlukeneyo, phakathi kwazo -Kubonakala-ukungaqiniseki kwinto eya kuba luhlobo oluzinzileyo lwe-gvSIG kwiintsuku ezingama-347.5 kwaye ukuba iya kufumaneka kwinguqu ephathekayo. Sicinga ukuba lo mbandela uza kusonjululwa ngokulula emva kokuba iCarto iba liqabane elipheleleyo lombutho we-gvSIG, impumelelo ebonakala ngathi ibalulekile kuthi ekomelezeni umgangatho womzi mveliso. Ngale nto sicinga ukuba inokudlulela ngaphaya komba we-hydrosanitary ukuya kwicandelo le-hydrological, eliligugu elinamandla amakhulu.
Kwaye okokugqibela, umceli mngeni wokuphembelela umgaqo-nkqubo kawonke-wonke, onobunzima ngakumbi kodwa onokubaluleka kakhulu ukuba amava, iinkqubo kunye neenkqubo zilungelelaniswe kwaye zinikezelwa njengesixhobo-sikhululekile ukungaxolisi malunga nokubonakala kweziko-ukuxhasa iMithetho yeNkqubo.
Bona ngaphezulu gvSIG Fonsagua
Post edlulileyo«Ngaphambilini course AutoCAD Free
Post Next I-XYZtoCAD, umsebenzi uqhagamshelanisa ne-AutoCADOkulandelayo »
2 Impendulo kwi "gvSIG Fonsagua, GIS yoyilo lwamanzi"
Ndiyabulela uFran, ndiya kulungiswa ngokukhawuleza xa ndibuyela kwimpucuko.
Ukusuka eCartolab kunye nam njengelungu leqela eliphuhlisa i-gvSIG Fonsagua, siyaxabisa kakhulu ukuhlalutya okwenzileyo kwesicelo. Izimvo ezifana nale nto zisinceda siqhubeke sizama ukuzama ukwenza izinto ngokunokwenzeka.
Okwangoku sidibana kunye nee-arhente eziliqela ukuxhasa ukuphuhliswa kwezixhobo ezintsha zesicelo kwaye zifudukela kwinguqu yamuva ye-gvSIG.
Ingcaciso enye kuphela yokucacisa. Isicelo ayenzelwanga nje ukwenza ulawulo yobugcisa iprojekthi yokwakha kodwa kunokuba ukwenza phambili ezizezinye supply kunokwenzeka. Le ngenye yeengongoma ezinzima kakhulu ukuzithumela. Indlela kwesiCwangciso for Esibanzi Resource Management Amanzi apho isicelo uwe, lunezigaba ezininzi ezahlukeneyo, yaye usoloko ukhetha ukwenza isicwangciso jikelele apho iinketho eziliqela echazwe yaye kamva wenze lesigaba sokwakha kuqala, kodwa kukho abantu abaninzi okhetha ukuya ngqo kwisigaba sokwakha, nto leyo idla ezifaneleke kakhulu ukusuka umbono wethu.